विशेष सप्तरीको चारवटै क्षेत्रमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
Ujyaalo बुधवार, मंसिर ६, २०७४ १९:५८:००
शुभ नारायण यादव/उज्यालो ।
सप्तरी, मंसिर ६ – आउँदो मंसिर २१ गते हुने दोश्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सप्तरीको चारै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।जिल्लाको क्षेत्र नं. १ मा मधेस गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार डा. सूर्यनारायण यादव र वाम गठबन्धका साझा उम्मेदवार अशोक कुमार मण्डलबिच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामदेव साहले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धालाई उथलपुथल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यहि क्षेत्रको प्रदेशसभा क बाट मधेस गठबन्धनका एवम् राजपाका महासचिव राजकुमार लेखी, नेपाली कांग्रेसका डा. सुबोध पोखरेल, वाम गठबन्धनका एवम् एमाले २ नं. प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल र स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाश खतिवडाबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । तर यो प्रदेशसभा क्षेत्रमा अन्ततः मधेस गठबन्धनका उम्मेदवार लेखी र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पोखरेलबिच रोचक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने स्थानीय बासिन्दाले आंकलन गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभा ख मा मधेस गठबन्धनका उम्मेदवार एवम् राजपाका उपाध्यक्ष नवलकिशोर साह र नेपाली कांग्रेसका बद्रीमहात्मान यादवबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने वाम गठबन्धनका उम्मेदवार मो. सकिलले समेत चुनावी प्रतिस्पर्धालाई केही रोचक बनाउने छन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा २ नं. क्षेत्रमा मधेस गठबन्धनका लागि अत्यन्त चुनौती थपिएको छ । यस क्षेत्रमा मधेस गठबन्धनका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उमेश यादवले कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यता यी दुबै उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरले चुनौती दिन तयार रहेका छन् । यस क्षेत्र तीनै उम्मेदवारका लागि प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ ।
त्यस्तै यसै क्षेत्रको प्रदेशसभा क मा मधेस गठबन्धनका साझा उम्मेदवार शैलेन्द्र साह, कांग्रेसका रञ्जित कर्ण र वाम गठबन्धका सरोज मण्डलबिच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा ख मा राजपा महासचिव मनिष सुमन, वाम गठबन्धनका महेश यादव, कांग्रेसका महानन्द यादव र स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मण यादवबिच कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
क्षेत्र नं. ३ मा मधेस गठबन्धनका चन्द्रकान्त चौधरीलाई आफ्नै भाइ वाम गठबन्धनका ताराकान्त चौधरी चुनौती दिन तयार देखिएका छन् भने यी दाजुभाइबिचको चुनावी प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेशकुमार यादव समेत चुनावी मैदानमा चट्टान भएर खडा भएका छन् । यस क्षेत्रमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ ।
त्यस्तै यसै क्षेत्रको प्रदेशसभा क मा मधेस गठबन्धनका दिनेश यादव, कांग्रेसका मो. समिम र बाम गठबन्धनका महेश चौधरीबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रदेशसभा ख मा मधेस गठबन्धनका विदेश्वर यादव, कांग्रेसका भगवति यादव, वाम गठबन्धनका एवम् एमाले सप्तरीका उपाध्यक्ष मो. मजिद साकिर र स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरेन्द्र यादवबिच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
यसैगरी क्षेत्र नं. ४ मा तीन ठूला उम्मेदवारबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । मधेस गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवम् राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, कांग्रेसका युवा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री तेजुलाल चौधरी र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार मो. इस्लामबिच अत्यन्त रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यस क्षेत्रमा तीनै उम्मेदवारको बर्चस्वको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
यसै क्षेत्रको प्रदेशसभा क मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले सप्तरीका अध्यक्ष गोविन्द न्यौपाने, मधेस गठबन्धनका बिनोद चौधरी र कांग्रेसका सीताराम साहबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यस्तै प्रदेशसभा ख मा मधेस गठबन्धनका अभिषेक यादव, वाम गठबन्धनका शशी यादव र कांग्रेसका विवेकानन्द झाबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
३ लाख ४६ हजार २ सय १४ मतदाता रहेको यस जिल्लामा चार प्रतिनिधिसभा र ८ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । चारै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा ५५ तथा ८ प्रदेशसभा क्षेत्रमा ९९ जनागरी १ सय ५४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।